Mutungamiri weBMM Anoti Chips Kushomeka Kunogona Kugara Makore Mamwe Makore | Ndinobva mac
Mutungamiri weBMM anoti kushomeka kwechip kunogona kutora mamwe makore maviri
Nyowani heatsink uye yemukati wiring
Sekutsanangura kwakaita mutungamiri weBM Jim Whitehurst kune iyo BBC, kushomeka kweChips kunogona kutora mamwe makore maviri. Iyo inozivikanwa tekinoroji femu yakakwikwidza neApple munguva yakapfuura yekufambira mberi uye kutengesa kwemunhu makomputa inotsanangura kuti fungidziro dzayo ndedzokurasikirwa kweanopfuura $ 110.000 bhiriyoni gore rino muchikamu chemotokari nekuda kwekushaikwa kwezvinhu.
Asi iyo indasitiri yehunyanzvi haina kusunungurwa kubva kumatambudziko uye zvine musoro zvinofanirwa kutaurwa kuti iyo chip uye microchip yekugadzira matambudziko iyo inopinda mukati memidziyo yese yemagetsi iyo yatinoshandisa muzuva redu nhasi.
Kubva pane kumwe kunonoka mukutumirwa kusvika kushomeka pamitsara yekugadzira
Mukupedzisira, izvo zvinoonekwa nemutengi ndezvekuti kutumira kwacho kunotora nguva yakareba kwazvo kupfuura zvaitarisirwa uye kuti mitsara yekugadzira haikwanise kuwana zvinhu zvekuunganidza zvishandiso uye izvi zvinoitika mu kunonoka kwenguva refu panguva yekutumira.
Tiri kuzviona mumakoni, mota, makomputa, mafoni, zvishandiso nemhando dzese dzemagetsi zvigadzirwa. Zviri pachena kuti iri idambudziko kune vese vanogadzira uye nevashandisi ivo pachavo, avo vanogumbuka mukuda kwavo kutenga zvigadzirwa nekuda kwekushomeka.
Kana izvozvi tave kuenda izvo zvinotarisirwa zvekunonoka ndezvenguva refu uye kuti vamwe vatofunga kuti zvichapedza makore akati wandei sezvazviri mutungamiriri wenyika yeIBM zvinowedzera kuomarara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mutungamiri weBMM anoti kushomeka kwechip kunogona kutora mamwe makore maviri
MacBook kutengesa kwakakura 94% mukota yekutanga yegore rino
AirPods 3 uye Apple Music Hi-Fi neChipiri, Chivabvu 18?